Ulawula njani iMinqweno yokutshaya kunye necuba- 802Quits
Ikhaya » Iivenkile » UKUHLALA PHANTSI » Indlela yokuLawula iMinqweno
INDLELA YOKULAWULA IINKONZO
Kuthatha ixesha elingakanani ukurhoxiswa kwenicotine? Iiveki ezimbini zokuqala zezona zinzima. Ukulungiselela ukugqitha ngokusebenzisa isicwangciso sakho sokuyeka ukuyeka, uncedo kugqirha wakho, inkxaso eyongezelelweyo evela kwiifowuni ezingama-802Quits okanye umntu oQeqeshayo woQeqesho kunye nenethiwekhi yakho yenkxaso iya kuba yinto ephambili kwimpumelelo yakho. Onke amava okuyeka azive ahlukile; kuya kuba nzima kwabanye abantu kunabanye. Ukuba uzame enye indlela ngaphambili kwaye ayisebenzi, cinga ukuzama enye. Zonke iinzame zakha phezu kwezinto ozifundileyo kwaye zikusondeza kwimpumelelo.
Ukuba liCuba Simahla
Uya kusabela njani ngomhla wakho wokuyeka? Ngaba ungatsiba ebhedini, ulangazelele ukuqala ubomi bakho obutsha obungenacuba? Okanye ngaba uza kuzifihla phantsi kwezikhuselo unethemba lokuba uluvo lokuyeka yayiliphupha nje? Nokuba yeyiphi na indlela, ziqhayise ngokwazi ukuba xa uvuka ngoSuku lwakho lokuShiya, ngoku awusenalo icuba ngokusemthethweni.
Usenokuzibuza ukuba ungayeka njani ukunqwenela iisigarethi kunye nezinye iimveliso zecuba. Nazi ezinye iingcebiso zokulawula imidiza kunye neminqweno yecuba.
Ngomhla woSuku lwakho lokuyeka, uya kufuna ukwenza itsheki ekhawulezayo yokuqinisekisa ukuba yonke icuba yakho ihambile. Emva koko, qalisa usuku lwakho ngokugqitha kwizizathu zokuyeka. Elinye icebo elilungileyo kukuhlanganisa "ibhegi yoxinzelelo." Kuyo, ungabeka iilekese ezinzima, iiminti, usele imicu yokusela okanye izivuseleli zekofu, ibhola yoxinzelelo okanye enye into yokugcina izandla zixakekile, ifoto yomntu omthandayo okanye isilwanyana sasekhaya okanye inqaku elisuka emntwaneni okanye elivela kuwe ukuze uqhubeke Nanini na xa ufumana loo minqweno.
Cinga ngeendawo oqhele ukutshaya, ukuhlafuna okanye ukuvota. Ukuba ungabaphepha xa uyekile, oko kuya kukunceda ekulingweni kwaye kuncede ukulawula icuba, i-e-cigarette okanye enye iminqweno yecuba.
Eyona nto ibaluleke kakhulu ekufuneka uyenzile kukuphumeza izicwangciso ozenzele olu suku, usuku olulandelayo kunye nexesha elide njengoko ufuna kude kube lula ukusebenzisa umnqweno wokusebenzisa icuba. Uyawazi amaxesha kunye neemeko eziya kuthi zenze ukuba ufune ukusebenzisa icuba, kodwa ukuqala ngoku ungabeka isicwangciso sakho sokuyeka ukuze ungene kula maxesha. Ngelixa ukuziva ubhetele — ukuphefumla ngokulula kunye nokuba namandla ngakumbi-kuya kwenzeka ngeentsuku nje ezimbalwa, kungathatha ukuya kwiinyanga ezintandathu ukuziva ungabinacuba. Ngapha koko, ukungabikho kwecuba kwiinyanga ezintandathu yeyona nto ibalulekileyo yokuhlala uyeke.
Iindlela zokusebenza zizinto onokuzenza ezikunceda ukuba ulawule iminqweno. Akukho ndlela yokwazi ngaphambi kwexesha eya kukusebenzela, ke kungcono ukhethe izinto ezininzi. Ungafumanisa ukuba abanye basebenza ngcono kunabanye kwiimeko ezithile. Ekuphela kwendlela yokwazi ngokuqinisekileyo kukuzama.
Kukho imigaqo emithathu elula ekufuneka ilandelwe xa ukhetha iindlela zokuthatha amanyathelo:
1.Kufuneka kube lula ukuyenza. Okukhona kulula, kokukhona unokuyenza.
2.Kufanele ukuba iyinto emnandi. Ukuba ayithandeki, amathuba awuyi kufuna ukuyenza!
3.Isenzo osikhethayo kufuneka siyeke okanye ubuncinci sinciphise umnqweno wakho. Ukuba ayinciphisi umnqweno wakho wecuba okanye i-e-cigarette, ukuhlafuna icuba, isnem okanye ivape, kuya kufuneka ufumane enye into eya kuthi.
Imizekelo yezicwangciso zokwenza ukuzama:
Ziqhelise ii-4Ds. Thatha umphefumlo ojulile okanye 2. SELA iglasi yamanzi. YENZA enye into. COTA imizuzu eli-10.
Nxibelelana nabanye abantu abayekayo abayaziyo into ohamba kuyo.
Ziphazamise de umnqweno udlule. Iminqweno emininzi ihlala kuphela imizuzu emi-3-5. Yintoni oyonwabelayo ngelo xesha? Ngaba ucinga ngemali oyongayo kunye nento onokuyithenga? Ukuthatha uhambo? Ngaba ubukele ividiyo oyithandayo yeYouTube? Jonga apha ngezantsi ukufumana ezinye izimvo.
Ukuba ungagqitha kuloo mnqweno wokurhoxa ngokuzikhathaza, usondele ngakumbi ekufikeleleni kwinjongo yakho. Xa ucinga ngokuyeka njengempumelelo yemizuzu emi-5 ngexesha, kunokuziva kulula ukufeza.
Cima imiyalezo yakho yakudala okanye uhlaziye incwadi yedilesi yefowuni yakho.
Cima ii-imeyile ezindala kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni.
Guqula ihempe okanye izihlangu. Esi senzo sincinci sinokukunceda ukuba usete kwakhona kwaye uzive ungcono.
Thatha ibhola ye-ping pong kunye nebhanti yerabha. Kuvakala ngathi awunangqondo, kodwa ukuzama ukusongela ibhanti yerabha xa ujonga ibhola ye-ping pong akukho lula njengoko kuvakala, kwaye kukugcina uxakekile de inkanuko idlule.
Hamba ujikeleze umgangatho okanye isakhiwo ukuba usemsebenzini — cinga ngaso njengekhefu elingatshayiyo.
Thatha imoto uyokuyihlamba okanye uyicoce ngaphakathi.
Gxobhoza uze uhlambe amazinyo akho. Kuya kunceda ukukhupha ingqondo yakho ekurhaleleni, kwaye uya kuba nomphefumlo omtsha!
Cinga ubuncinci iingoma ezi-5 ezinamagama abantu kuzo.
Thatha ikhefu likajongilanga lokutya ikhefu-ukusebenza ngezo shells kunokuba ngumceli mngeni kunye nendlela esempilweni yokuchitha imizuzu emi-5.
Chuba iorenji nokuba awufuni kuyitya. Kuthatha imizuzu emi-5 ukukhupha zonke izinto ezimhlophe.
Xa inkanuko ibetha, yiya kwigumbi langasese, hlamba izandla zakho kwaye uzijonge esipilini. Ngexesha ulungele ikhefu lecuba, umnqweno uhambile.
Dlala nge-putty yokuphazamiseka okanye ilitye lokukhathazeka ukugcina izandla zakho zixakekile ngelixa usebenza ngenkanuko.
Thatha uhambo olukhawulezayo kwaye ubale amanyathelo akho apha endleleni, kwaye ubone ukuba akukho okunye onokukwenza usuku ngalunye.
Coca malunga nendlu okanye uwenze ikhabethe. Ibhonasi: akukho zigarethi kunye nekhaya elitsha, elingenabala.
Dlala i-solitaire okanye omnye umdlalo ukuba ukwikhompyuter, kodwa hayi ukuba indawo yakho yokusebenza ayikuvumeli!
Ziqhelanise nee-4Ds… Uphefumlela ukuphefumla. SELA iglasi yamanzi. YENZA enye into. COTA imizuzu eli-10.
Ukuza noluhlu lwakho lwezinto ezinokukuphazamisa kunye neengcebiso zokulawula iminqweno, cinga ngamaxesha omhla apho unqwenela icuba okanye i-e-cigarette, ukuhlafuna icuba, isinemfu okanye ukuvota kakhulu kwaye udibanise incam. Umzekelo, ukuba uhlala ukhanyisa emotweni, vula unomathotholo kwaye ucule kunye nengoma. Uninzi lweengoma yimizuzu emithathu ukuya kwemihlanu. Nje ukuba ugqibile, inkanuko yakho imele ukuba ihambile.
Ngaba ufuna ukuphazamiseka?
Khetha izixhobo ezibini zokuyeka simahla kwaye siza kuzithumela kuwe!
Izixhobo Zokuyeka Simahla>